Thuthukisa Ukuphila Kwakho Kwezithombe Nge-3D - LucidPix
Namanje Impilo Photography ku-3D
Abantu abaningi bahlala bebheka ukuthuthukisa izithombe zempilo abazithatha ezingadini zabo nasezindlini ezingemuva. Abanye bacabanga ukuthi kudinga ukukhanyiswa okukhethekile, abanye bakholelwa ukuthi kuthatha ikhamera ehlaba umxhwele. Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi kungani konke okuzwile sekuwile emuva kubuchwepheshe ngemuva.
Amandla amasha amakhulu empilweni yezithombe namanje Izithombe ze-3D. Amandla abo okuguqula izithombe zangemuva noma imisebenzi emihle yobuciko ibe yimidwebo enokusebenzelana ikunikeza amandla okuthatha izithombe zakho uziyise ezingeni elilandelayo.
Ngezansi uzothola ukuthi yiziphi izinhlobo zezithombe ezinamandla amakhulu okuguqulwa abe yi-3D, azithathe kanjani lezo zithombe, nokuthi imaphi amathuluzi alungele ukuguqulwa kwe-3D.
Izakhi ezibalulekile zezithombe ezinhle zempilo ye-3D
Uma kukhulunywa ngokukhetha izithombe ongaziguqula zibe yi-3D, kukhona izinto ezimbalwa ezibalulekile ezingasinikeza isithombe sakho sikhuthaze. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, kuvame ukuba lusizo ukuba nesithombe esijulile ngokujule kwensimu, okusho ukuthi isihloko sigxile, futhi ingemuva lifiphele.
Ukukhetha isithombe sokwakheka kwesithombe, kunokuguqula isimo se-landscape kuvumela indalo yakho ye-3D ukuthi igcwalise kahle isikrini sefoni.
Izihloko Ezinhle zokuphila kwezithombe namanje ku-3D
Ezithunzini zokuphila namanje kunezihloko ezimbalwa ezibukeka zimangalisa ngokuphelele ku-3D. Isihloko esisodwa esihlala sidonsela iso yizithelo noma izitshalo. Ngaphezu kokuba ucwaningo lomculi wasendulo, akhanya kahle, amahle futhi angaletha imizwa eminingi yemvelo. Umuntu angahle acabange ukunambitheka kwesithelo, umuzwa wetshe, noma ukuswayeka kwimbali emoyeni, ukuzidweba esihlokweni sesithombe sakho. Lezi zifundo ngokuvamile ziletha uhlobo oluthile lwemizwa ejabulayo nezolile kumbukeli.
Namanje Imidwebo Yempilo
Olunye uhlobo lwempilo eselokhu luguqula lumangalisa izithombe ze-3D imidwebo yobuciko obuhle. Kunabaculi abaningi abanjengo Vincent van Gogh, ULeonardo Da Vinci, noMichelangelo bonke abanemisebenzi eminingi yobuciko abaguqukele kahle kakhulu baba yi-3D. Akukhona nje ukuthi yimidwebo yabo kuphela, kepha izindlela zabo zomhlaba nezicucu eziyimfihlo benze izithombe ezisebenzisana kakhulu lapho ziguqulwa zaba yi-3D.
Akunakusho ukuthi, lapho ubuciko balokho kubucayi kanye namandla kungangena kakhulu ngaphansi kokuguqulwa kwe-3D, noma iyiphi ingxenye yobuciko besikhathi sokuphila oyikhethayo inamandla amakhulu okuguqulwa futhi asetshenziswe kakhulu.
Sengiphetha, kunezigaba eziningi ngaphakathi kwesimo sokuthwebuka kwezempilo nobuciko, kepha konke lokhu kungathuthukiswa futhi kuphumelele lapho kuguqulwa kube yi-3D. Ngakho-ke, lapho uthatha isinqumo sokuthi impilo yakho esezingeni eliphezulu ingaba isithombe esikhiqizayo yini ku-3D, iya ulande uhlelo lokusebenza lwe-3D, njenge I-LucidPix, futhi uzibonele amandla okusasindisa izithombe zokuphila ku-3D.
Ungayenza Kanjani i-Photoshop Camera Photos 3D →← LucidPix UkuQalwa Kwesiqondisi Esheshayo